भ’यानक दु’र्घटनामा परे चर्चित र्यापर बादशाह… – Khabar Silo
काठमान्डौ , हालै बलिउडका चर्चित र्यापर ‘बादशाह’को कार दु’र्घटना भएको छ। यस खबरले उनका प्रशंसकहरु निकै नि’राश भएका छन्। यस दु’र्घटना, पंजाबको लुधियानामा भएको थियो। दु’र्घटनामा बादशाहलाई हल्का चो’टपटक लागेको छ। श्रोतका अनुसार, सडकमा अ’त्यधिक कुहिरोका कारण ३६ वटा सवारी एक साथ दु’र्घटना भएको थियो। यस दु’र्घटना पंजाबको सिरहिंदबाट दिल्लीतर्फ जाने नैशनल हाइवेमा भएको थियो। तर खुसीको खबर यो हो कि, यस भ’यानक दु’र्घटनामा पर्दा पनि बादशाहलाई भने त्यस्तो धेरै क्षति भने भएको छैन।
खबरका अनुसार, एयरब्यागका कारण उनलाई धेरै क्ष’ति नभएको हो। बादशाह आफ्नो आगामी चलिचित्रको शू’टका लागि पंजाबमा निकै व्यस्त छन्। बादशाहले लामो समय देखि आफ्नो र्यापका कारण लाखौँ व्यक्तिहरुको मन जित्न सफल भइ सकेका छन्। त्यति मात्र नभई, केहि समय अघिदेखि बादशाह चलचित्रहरुमा पनि देखा पर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म बादशाहले लगभग सबै बलिउड कलाकारहरुसंग काम गर्नुका साथै कैयौँ बलिउड कलाकारहरुलाई आफ्नो गीतमा नचाई सकेका छन्।
अन्य समाचार :बिहीबार बिहान खण्डग्रास सूर्यग्रहण, बिदा छैन : गृह मन्त्रालय काठमाण्डाै – यही पुस १० गते बिहीबार पौष कृष्ण औँसीका दिन बिहान खण्डग्रास (आधा ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
ग्रहणले बिहान ८ः४२ मा स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण सुरु हुनेछ । बिहान १०ः०१ बजे मध्य हुने ग्रहण ११ः३१ बजे समाप्त हुनेछ । पूर्व र आग्नेय कोणको बीचबाट ग्रहण समाप्त हुने समितिले जनाएको छ ।
ग्रहण लाग्नुभन्दा चार प्रहर (१२ घण्टा) अघि अर्थात् पुस ९ गते बेलुकी ८ः४२ देखि बालक, वृद्ध र रोगीबाहेकलाई शास्त्रीयरूपमा भोजन निषेध रहेको उहाँले बताउनुभयाे । ग्रहणका बेला खानपिनलगायत महत्वपूर्ण कामका लागि निषेध गरिएको छ ।
सूर्य ग्रहणमा चार प्रहर (१२ घण्टा) र चन्द्रग्रहणमा तीन प्रहर (नौ घण्टा) अघिदेखि सुतक लाग्ने धर्मशास्त्रविद्समेत रहनुभएका गौतमले बताउनुभयो । सुतक लागेपछि भोजन गर्न नहुने धार्मिक विश्वास छ । ग्रहण हेर्न कर्कट, तुला, कुम्भ र मीन राशि हुनेहरुका लागि राम्रो छ । बाँकी राशिकालाई शुभ फल नदिने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख गरिएको छ ।
मेष राशि हुनेलाई माननाश, वृषलाई कष्ट, मिथुनलाई स्त्रीपीडा, कर्कटलाई सौख्य, सिंहलाई चिन्ता, कन्यालाई व्यय, तुलालाई श्रीप्राप्ति, वृश्चिकलाई क्षति, धनुलाई घात, मकरलाई व्यय, कुम्भलाई लाभ र मीनलाई सुख प्राप्तिको फल प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
यसअघिका सूर्यग्रहणका बेला सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको थियो । यसपटक भने क्यालेन्डर (वार्षिक पात्रो) मा बिदा उल्लेख नगरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
क्यालेण्डरमा बिदा नभएको बेलामा सरकारले निर्णय गरेर बिदा दिने गरेकामा हालसम्म सूर्यग्रहणका लागि पुस १० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
Posted on April 28, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं। भारतको नयाँ दिल्लीबाट कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर विमानमा चढेका कम्तीमा ५२ जना यात्रु हङकङमा ल्याण्ड गरेपछि जाँच्दा संक्रमित पाइएका छन् । यी सबै यात्रु एउटै विमानमा चढेर हङकङ पुगेका थिए । यी सबै यात्रु अप्रिल ४ का दिन भारतको विस्तारा एयरलाइन्सबाट हङकङ पुगेका थिए । यो विमानबाट गएका जति यात्रु संक्रमित देखिएका थिए हङकङमा […]
प्रभास र दीपिका एउटै फिल्ममा, दर्शक उत्साहित
Posted on July 19, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं – दक्षिण भारतीय फिल्मका सुपरस्टार प्रभास र बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले एउटै फिल्ममा काम गर्ने भएका छन् । यी दुईलाई एकसाथ दक्षिण भारतीय फिल्ममा देख्न पाइन भएको हो । फिल्मलाई नाग आश्विनले निर्देशन गर्नेछन् । दीपिकाले यो फिल्ममा काम गर्न पाउँदा आफू उत्साहित भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी छिन् । दक्षिण भारतीय सुपरस्टार प्रभास ‘बाहुबली’ […]